what, when, why: fake अथवा anonymous मेल
fake अथवा anonymous मेल
तपाईंले कसैलाई fake अथवा anonymous मेल पठाउने बारे सोच्नु भएको छ ? के यो सम्भब छ ? अबस्य पनि सम्भब छ , यस्ता धेरै websites हरु ईन्टरनेटमा पाईन्छन जसबाट तपाईंले यस्ता fake र anonymous मेलहरु आफ्नो identity लुकाएर पठाउन सक्नु हुन्छ । यस्ता साईटहरु बाट कुनै पनि mail address बाट कुनै पनि mail address मा मेल पठाउन सकिन्छ । भन्नुको मतलब तपाईंले कुनै अरुको ईमेल address बाट आफुले चाहेको ईमेल address मा मेल पठाउन सक्नुहुन्छ । यसरी तपाईंले आफ्ना साथी भाईहरु सँग रमाइलो पनि गर्न सक्नु हुन्छ ।
यो सर्भिस तल उल्लेखित फाईदा लिन सकिन्छ ।
@ लोग्ने वा स्वास्नी ले cheating गरेको समात्न सकिन्छ ।
@ तपाईंको आफ्नो साथी साच्चिकै साथी हो कि होइन पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
@ कसैलाई warning दिन सकिन्छ ।
@ पुलिसलाई illegal कृयाकलापहरुको बारे inform गर्न सकिन्छ ।
@ tax छल्ने ठगहरु बारे tax office लाई inform गर्न सकिन्छ ।
@ कसैलाई आफ्नो love बारे confess गर्न सकिन्छ ।
@ आफ्नो साथीभाईहरु सँग ईमेल जोक गर्न सकिन्छ ।
@ जती खेर तपाईंको आफ्नो ईमेल सर्भिसले काम गरेको छैन ।
@ यदि तपाईंको private ईमेल address recipient ले banned गरेको छ भने ।
@ आफ्नो हाकिमलाई कसैले fraud गरेको छ भने रिपोर्ट गर्न सकिन्छ ।
@ यस्तै यस्तै अरु धेरै फाईदा ................
यस्तो सर्भिस provide गर्ने केही वेबसाईटहरु :
रमेश जि यो साईट हरु को जानकारी राम्रोछ तर मलाई राम्रो पक्ष भन्दा नराम्रो पक्ष नै डरलागदो छ जसतो लाग्यो। पती पत्नी मा सन्का गर्ने सम्बन्ध नै बिग्रने हुन सक्छ। खेर तेयो त राम्रो अनी नराम्रो पक्ष त सबैमा हुन्छ। के लिne अनी के नलिने आफुमै निर्वरहुण्छ होइन र।